Uchungechunge 870JD Jet Dragon® Dredge - i-Ellicott Dredges
Uchungechunge 870JD Jet Dragon® Dredge
I-870JD Jet Dragon® Dredge
I-Series 870JD Jet Dragon® dredge iyi-deep deep digter cutter dredge esetshenziselwa ukuthola isihlabathi nezinye izinto ekujuleni okujulile okunengqondo. Le dredge eqinile, enokwethenjelwa, futhi ephathekayo ifaka imibhobho yamanzi emibili kusika wokuhlanza ubumba noma ukukhipha ezinye izinto kusuka kuzinsimbi ngaphandle kokungenelela okwenziwa ngesandla.
I-870JD DREDGE ADVANTAGES
Iyaphatheka kakhulu ngamaloli ezindaweni ezingaphakathi nezwe.
Uhlelo lokulawula olusekelwe ku-State-of-the-Art PLC.
IJet pump assist ivumela izinga eliphezulu lokukhiqiza kuzinhlelo zokumba ezijulile ngaphandle kwezinkinga zepompo yesitebhisi.
Ukusetshenziswa okujwayelekile kufaka phakathi ukugoba isihlabathi namatshe, ukwakhiwa kabusha komhlaba, kanye nokusetshenziswa kosonkontileka abancane.
Usayizi Wokukhishwa: 14 ″ x 14 ″ (350 mm x 350 mm)
Injini Eyinhloko Isibungu C-18: 575 HP (431 kW)
Injini Esizayo C-13: 385 HP (289 kW)
Amandla @ Isinqe seDrayivu: 100 HP (75 kW)
Ubuningi Bokudonswa Okukhulu: 60 '(18.2 m)
ISICELO SOKUQHAWULA KAKHULU
Ikhithi yokugqoka i-Stern winch
Impeller ephakamisa ingwegwe
Lawula ukushisa kwekhebhu nomoya opholile
Izinketho ezingeziwe ziyatholakala uma ucelwa